Ezempilo - Bezzia | Bezzia
La impilo Ngokuqinisekile iyinsimu ebaluleke kunazo zonke empilweni futhi ngokujwayelekile ihlotshaniswa neminye efana nenhlalakahle, ibhalansi noma ukungabikho kwezifo. Ngakho-ke, ngokusho kwe-World Health Organisation, ibhekisela kuso njengesimo esiphelele inhlalakahle yomzimba, ngokwengqondo nangokwenhlalo.
E-Bezzia sinikezela isigaba kulesi sihloko futhi kuso, sibhekana nezihloko ezinjenge izifo, amathiphu okuba nempilo enhle noma ukunciphisa umzimba. Ngalezi zihloko, sifuna ukunikela ngolwazi ukuze abantu bazi ngokubaluleka kokuzinakekela, ukudla kahle noma ukuzivocavoca umzimba, kodwa futhi sigcizelele ukubaluleka kokusebenzisa la macebiso.
Siyethemba ukuthi lapha uzothola ugqozi lokunakekela impilo yakho.
Ukuzivocavoca ukukhipha umzimba wonke ekhaya
Por UToñy Torres kwenza Amahora we-6 .
Ufulawa weChickpea: Izinzuzo zayo nemibono emihle yokuyisebenzisa
Por USusana godoy kwenza Amahora we-10 .
Ukuba mncane akufani nempilo
Por UToñy Torres kwenza 1 usuku .
Ukuba mncane kuvame ukuhlobene nokuba sempilweni futhi lokhu akulungile ngokuphelele futhi kungadala okubi ...
Yini i-premenstrual syndrome?
I-Premenstrual syndrome isho inani elikhulu lezimpawu ezihlobene nesikhathi sokuya esikhathini. Izici ezivamile nezimpawu ...
Por UToñy Torres kwenza Izinsuku ze-4 .
Namuhla ngaphezu kokuqeqeshwa kukodwa, sizothathwa ngochungechunge lokuzivocavoca noma ukuzelula ...
Ukuba nokuhamba okuhle kwamathumbu kubalulekile ukujabulela impilo enhle. Ngoba ukususa udoti emzimbeni ...
Lapho usebenza kungenzeka ukuthi uhlupheke ngokulimala okuhlukahlukene ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukulungisa umzimba kahle ngombono ...
Uyazi ukuthi kunamavithamini amaningi esiphila nawo nsuku zonke. Zonke zinochungechunge lwezinzuzo ...
Ungasenza kanjani isikhathi sakho sehle ngokushesha
Ungakuqeda kanjani ukuphathwa yizinyo okubuhlungu?
Yazi ukusebenza kwawo wonke amavithamini
I-Magnesium carbonate isimangaliso somzimba wakho
Ungenza kanjani isinyathelo esihle sokunciphisa massage
Sequelae weBulimia ne-Anorexia
Kuyini i-panic attack?